How to recover photos deleted from your digital camera !!! ကင်မရာကနေမှားဖျတ်မိတာ ပြန်ယူမယ် !! (26Mb) | zawthwin(android software/gameနှင့်မြန်မာစာအုပ်စင်) ကိုဇော်သွင်မျှဝေပေးပြီ
How to recover photos deleted from your digital camera !!! ကင်မရာကနေမှားဖျတ်မိတာ ပြန်ယူမယ် !! (26Mb)
Posted on November 26, 2013 by zawthwinကိုဇော်သွင်(စန္ဒယား နှင့် ကီးဘုတ်)	DeleteFIX ဆောစ့်ဝဲလ်လေးကတော့ မိမိရဲ့ digital camera, memory carads USB Devices အစရှိသည့်တို့မှ မှားဖျတ်မိတဲ့ video and photo files တွေကို recovery လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ Software ဖြစ်ပါတယ်။brand, such as Canon, Olympus, Pentax အစရှိသည့် digital camera တို့မှအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် deleted ,format လုပ်ပြီးမှ ပြန်လိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ DeleteFIX recovery Software လေးကိုRun လိုက်ရုံနဲ့အဆင်ပြေသွားမှာပါ။
How to recover the deleted photos?အရင်ဆုံး DeleteFIX Photo Software လေးကိုအရင် Install လုပ်လိုက်ပါ။ပြီးရင် မိမိ camera ကို computer နဲ့ချိတ်ဆက်လိုက်ပါ။Recovery software program လေးကို Run လိုက်ပါ။Window မှာ program ရဲ့ viewer လေးပေါ်လာရင် မိမိပြန်လိုချင်တဲ့ ဟာကိုရှာပါ.ပြီးရင် ထားမယ့်နေရာကိုရွေးပေးလိုက်ပါ။ ပြီးရင် “Activate” button လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ပြီးရင်မိမိထားချင်တဲ့နေရာမှာပြန်ကြည့်လိုက်ရင် ရောက်နေတာကိုတွေ့ရမှာပါ။
အားလုံးအဆင်ပြေအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတာ Install လုပ်တာကအစ Video ဖိုင်လေးနဲ့ရှင်းပြထားပါတယ်။ ဒေါင်းလော့စ်ဖိုင်ထဲမှာ ကြည့်ပါ။ကျွန်တော်တင်သမျှပိုစ့်တွေ Facebook ကနေရယူချင်တယ်ဆိုရင် ဒီမှာ Like နှိပ်ပါ မန်ဘာဝင်ခဲ့ခြင်းဖြင့် ပိုစ့်အသစ်တင်တိုင်း မိမိ Gmail ထဲကိုတိုက်ရိုက်ရောက်ရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်မန်ဘာဝင်ခဲ့ဖို့ခဲ့ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။
This entry was posted in Recover Software, Software. Bookmark the permalink.
← Football Manager Handheld 2014 APK DATA 5.0.3 Premium Games Android	Ubuntu 13.10 Desktop လိုချင်သူများအတွက် →